Inona ireo fitaovana azonao atao mba hanoroanao manara-maso ny fivarotana Amazon amin'ny mpifaninana amiko?
Ny fanadihadiana ny fifaninanana dia ampahany manan-danja amin'ny fikarohana ataon'ireo mpivarotra mahomby amin'ny Amazon. Raha mila manara-maso ny fivarotana Amazon amin'ny mpifaninana aminao ihany koa ianao, eto dia misy asa vita fohy hanampy anao amin'izany. Tena marina ve ny fifaninanana misy anao? Inona no azo atao tsara kokoa? Moa ve ny vokatrao tsara araka ny lazainao? Ireto ny zavatra manan-danja indrindra ho anao mba hijery tsara ny sainao - famerenana, fampiroboroboana, ary lisitra. Andao hojerentsika tsirairay avy etsy ambany.
It's no-brainer, but reviews are really useful sources of the initial researcher. Tsy ilaina ny milaza fa ny tsikin'ny mpanjifa amin'ny vokatra iray ihany dia afaka manome anao sombin-tsaina mikasika ny zavatra mety ho azo hatsaraina, na ny mifamadika amin'ny vice versa. Ary fitsipika ankapobeny dia ny fivezivezena avo indrindra izay manolotra ny vokatra mitovy dia manana zavatra manodidina ny telovolana mpanjifa. Fa ny anjaran'ny liona na mpividy aza dia mazàna no tsy tonga dia mandao ny valiny. Inona àry no azo atao amin'izany? Manoro hevitra aho hampiasa ny fitaovana maimaimpoana maimaim-poana avy amin'ny Feedback Genius. Tsy vitan'ny hoe mandefa fampandrenesana momba ny fanamarihana ratsy na ny fijerin'ny mpanjifa anao ianao mba hananana haingam-pandeha amin'ny fe-potoana fohy nefa ahafahanao manana mailaka mandeha maimaika, izay toy ny fampahatsiahivana mahazatra manoloana ny mpividy rehetra vao haingana. fijoroana ho vavolombelona.
Indraindray ny mpifaninana akaiky anao dia mety hipoitra tampoka amin'ny fivarotana goavana, ary ny ankamaroan'ireo baiko mitohy notarihan'ny fampiroboroboana dia nanao ny lalana marina. Ary rehefa tsapanao fa ny tetika manokana ataon'ny mpifaninana iray na ny tetikasa madinidinika dia tena miasa - nahoana no tsy manara-maso ny fivarotana Amazon sy ny ezaka fampiroboroboana ny mpanohitra anao amin'ny fampiasana azy io ho mafy indrindra ho an'ny tombontsoanao manokana? Eto dia rehefa miditra an-tserasera ny Big Tracker online tool. Amin'ny alalan'ity fitaovana manampy ity, dia tsy afaka manara-maso ny fivarotana Amazon ianao, ny vidin'ny fihenam-bidy amin'ny mpifanandrina aminao fa ny ankamaroan'ny rakitra fampahafantarana ao amin'ny rakitsoratra. Mieritrereta ny hetsika manaraka anao efa fantatrao ny zavatra ataon'ireo mpifaninana aminao manao ny fomba tsara indrindra ahafahanao manara-dia.
Ity no faritra lehibe indrindra amin'ny fifantohana amin'ny fialana amin'ny fifaninanana. Ary ny fanatsarana ny lisitry ny vokatra vokatra amin'ny ezaka fanatsarana tsara dia ny tena mahavariana matetika izay mety hipoitra tsara indrindra amin'ny fikarohana an-tserasera. Ity no fomba ahafahanao mitarika - ny manara-maso ireo teny fanontana amidy Amazon ampiasain'ireo mpivarotra an-tsokosoko mba hitondrany ny ankamaroan'ny olona voamarina ao amin'ny vokatrao, vokatra, teboka, sns. Ary manoro hevitra aho fa hampiasa fitaovana Jungle Scout izay hamonjy anao ora maro fikarohana lalindalina sy mahatsiravina. Ny lozisialy amin'ny lalao mpifaninana dia mametraka fitarihana lehibe ary mahazo ny soso-kevitra ankapobeny ankavanana sy ny fahaiza-mandanjalanja momba ny fampiasana fehezanteny fohy amin'ny lava-pahefana ny fomba hendry indrindra. Azonao atao koa ny manamarina ny fitaovan'ny Merchant Words, izay mikendry tsara ny trangan'i Amazon, miaraka amin'ireo volavolam-pikarohana ambony indrindra sy ireo teny fanalahidy tena ampiasain'ny mpivarotra velona any Source .